P&O Cruises Australia gbatịrị nkwụsị na ọpụpụ Sydney na Brisbane
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ịtụ egwu » P&O Cruises Australia gbatịrị nkwụsị na ọpụpụ Sydney na Brisbane
Akụkọ na -agbasa Australia • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Ịtụ egwu • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ okomoko • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Gọọmentị emeela ka o doo anya na ọnụ ụzọ ịgba ọgwụ mgbochi bụ isi ihe na-emechi mkpọchi mkpọchi, mgbochi oke yana, n'ikpeazụ, ịmalitegharị Australia. Akụkụ nke ịlaghachi n'obodo nkịtị na -ahụ na ihe karịrị otu nde ndị Australia na -ahọrọ ezumike njem ụgbọ mmiri kwa afọ nwere ohere ịme ya ọzọ.
Nkwụsịtụ afọ ofufo a ga -emetụta ụgbọ mmiri emebere ịpụ na Brisbane na Sydney.
P&O Cruises Australia gosikwara na ọ na -akagbu oge ọkọchị Melbourne, nke agaghịzi ekwe omume ịnapụta.
P&O Cruises na -atụ anya ụbọchị ọ ga -anabata ndị ọbịa ya n'ụgbọ.
P&O Cruises Australia taa gbatịpụrụ ọrụ ya maka njem ụgbọ mmiri na -apụ na Sydney na Brisbane site na ọnwa ọzọ ruo etiti Jenụwarị afọ na -esote iji nye ndị ọbịa ntụkwasị obi siri ike na ịhazi ezumike ekeresimesi na nke Afọ Ọhụrụ n'ihi ejighị n'aka na nloghachi njem ụgbọ mmiri.
Nkwụsịtụ afọ ofufo ga -emetụta njem ụgbọ mmiri a ga -eme site na 18 Disemba, 2021 ruo 14 Jenụwarị, 2022 (maka Brisbane) na 18 Jenụwarị, 2022 (maka Sydney).
P&O Cruises Australia gosikwara na ọ na -akagbu oge ọkọchị Melbourne, nke agaghịzi ekwe omume ịnapụta n'ihi ndọtị ọhụụ.
"Anyị ghọtara na nke a bụ ihe na -akụda mmụọ maka ndị ọbịa anyị bụ ndị na -atụ anya iso ndị enyi na ezinụlọ ha na -eme njem ekeresimesi na Afọ Ọhụrụ, mana anyị chọrọ ime ọkwa a ngwa ngwa o kwere mee iji hụ na ha nwere ike ime atụmatụ nke ọma maka oge ezumike," P&O Cruises Onye isi ala Australia Sture Myrmell kwuru.
“Ọ ga -amasị m ikele ndị ọbịa anyị ọzọ maka iguzosi ike n'ihe na nkwado ha. Anyị na -atụ anya ụbọchị anyị ga -anabata ndị ọbịa ka ha bata n'ụgbọ iji mee emume pụrụiche ndị a na kalenda ezumike. ”
P&O Cruises Ọstrelia kwupụtara ebumnuche ya ịmaliteghachi ọrụ ụlọ site na njem ụgbọ mmiri maka ndị ọbịa na ndị ọrụ ụgbọ mmiri ọgwụ mgbochi.
“Gọọmentị emeela ka o doo anya na ụzọ ịgba ọgwụ mgbochi bụ isi ihe na-emechi mkpọchi mkpọchi, mgbochi oke yana, n'ikpeazụ, ịmalitegharị Australia. Ma akụkụ nke ịlaghachi n'obodo nkịtị na -ahụ na ihe karịrị otu nde ndị Australia na -ahọrọ ezumike njem ụgbọ mmiri kwa afọ nwere ohere ime nke ahụ ọzọ, "Mr Myrmell kwuru.
"Ọ bụ ihe nwute, anyị amabeghị ihe ndị gọọmentị na ndị ọrụ ahụike ọha chọrọ maka nlọghachi azụ nke njem ụgbọ mmiri mana anyị ka nwere olile anya na mkparịta ụka ndị a ga-agbakọ ọsọ ugbu a enwere ezigbo mmegharị gburugburu ọha."
A ga -amara ndị ọbịa emetụtala akwụkwọ ha maka nkwụsịtụ na nhọrọ dị ozugbo ma ọ bụ site na onye nnọchi anya njem ha họpụtara.